Brain uye Mwoyo weNational Electric Chitima Kuvimba kune ASELSAN | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara54 SakaryaIyo Brain uye Mwoyo weNational Electric Chitima yakapihwa kuna ASELSAN
18 / 02 / 2020 54 Sakarya, Railway, GENERAL, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, KUZVIDZIVIRIRA, TURKEY
uropi nemoyo wechitima chemagetsi chitima chakapihwa aselsana
Neye 2020 Investment Programme, kupihwa kwe High Speed ​​Chitima Sets kubva kunze kwenyika kuchamiswa, uye nzira yekugadzirwa kwemukati neyenyika kuti ivhurwe zvakare ichachengetedza tekinoroji yekufambisa yechitima nekumhanya kukuru uye mabhiriyoni euros yehupfumi.
Zvakaita zvinokosha mberi nokuda wechipfuwo kugadzirwa dzakaoma ruzivo uye nyika kudzivirira Mazinga mu sectors siyana kusanganisira Turkey, kuzvipira nokuda Year 2020 Investment Program mimwe unotsigira. Zvisarudzo zvine chekuita neNational Electric Sitima Set projekiti inosanganisirwa muChirongwa inopa muenzaniso unoshamisa weiyi kuda. Chirongwa ichi, icho chakatanga mwaka mutsva maringe nenzvimbo nenzvimbo dzenyika muzvitima zvekufambisa, zvinotora fambiro mberi munzvimbo dzakaita sekutsigira indasitiri yepamusha, kuderedza hunyanzvi hwehunyanzvi munzvimbo dzinodiwa, kudzikisira kutsamira kwedzimwe nyika, uye kubudirira mune zvehupfumi.
Iyo nguva yekutenga kubva kunze kwenyika inopera
Muchirongwa ichi che 12 Investment Program, icho chakagadzirirwa kuenderana nezvinangwa zvakatemerwa mugwaro reruzivo rwekunyepedzera uye rakaburitswa mugwaro reGazi rehurumende musi wa 2020 Kukadzi 2020 neChisarudzo cheMutungamiri, zvinoratidzwa kuti chitima chemagetsi chenyika chichaitwa pamwe nezvivakwa zvemukati neenyika. Muchikamu chechirongwa chakataurwa muchirongwa che "High Speed ​​Train Set", pane zvirevo zvinotevera: "Yekuwedzera Yekumhanya Yechitima Chekumusoro haizopiwi kubva kune imwe nyika zvichitevera Chirevo chePresident chakanyorwa musi wa 12. National Electric Train Sets inogadzirwa neTÜVASAŞ ichashandiswa mumakwikwi ekumhanya echitima. " Izvo zvinotaurwazve muchirongwa kuti epuro yekugadzira yezvipiro ichave iri pakakwirira kwazvo pakutenga mota nemidziyo.
Muchikamu ichi, zvinofungidzirwa kuti izvi zvichasimbisa ruoko rwemakambani epamba kutarisana nevatambi vekunze vari mumusika uye kuti indasitiri yepamusha neyenyika inokwanisa kuwana zvibodzwa zvavo zvepakati uye zverefu munguva pfupi kana vasina kudzoka kubva panguva ino.
"Uropi" uye "moyo" wechitima chakapihwa kuna ASELSAN
ASELSAN, iyo ichangotanga kutamisa hunyanzvi hwayo mukudzivirira matekinoroji kunzvimbo yevagari, yakaverengerwawo muNational Electric Train Set projekiti. Turkey Wagon Industries Inc. nokutengesa (TÜVASAŞ), zvinoenderana nesungano, iyo purojekiti YeTrust Control uye Management System uye Traction Chain System inopihwa neASELSAN.
Yechitima Kudzora uye Management System (TKYS), iyo inotsanangurwa se "pfungwa" yechitima, inonyanya kutonga basa rakakosha remotokari sekukasira, deceleration (braking), kumisa, kudzora pamusuwo, kuyambuka uye kupfuura nemwenje, nepo zvinyaradzo-zvinotungamirwa masisitimuya akadai sekugadziriswa kwemhepo uye mamiriro evanofamba. zvakare inokwenenzvera. TKYS kombiyuta yakagadzirirwa mune modular chimiro uye ine yakakwirira chikamu chekuvimbika uye yakavimbika; dhizaini, kutonga, kuchengetedza uye kuvimbika algorithms, Hardware uye yakadzamidzirwa software yakagadziridzwa yakazara zvakasiyana.
Iyo Traction Chain System (mushanduri mukuru, shanduri inoshandura, inobatsira inoshandura, traction mota uye gearbox) nezvinhu zvinotsanangurwa se "mwoyo" wechitima zvinoitwa nenzira iyo ichapa kushanda kwakanyanya kunobudirira neyekutanga software, hardware uye algorithms.
Kumhanyisa kwakanyanya mukugadzirwa
Nekuda kwekuongororwa kwechiitiko cheASELSAN uye kugona muindasitiri yekudzivirira muNational Electric Train Set purojekiti, zvese nekumhanyisa kugadzirwa uye nguva zvakachengetedzwa. Icho chokwadi chekuti ASELSAN chakabatanidzwa mumasisitimu ari iyo "pfungwa" uye "moyo" wechitima kubva pamatanho ekugadzira anounza mhedzisiro inoshamisa senge kupedzisa kugadzirwa, iyo inogona kugara kwemakumi emakore pasi pezvakajairika, mumakore 1,5.
€ 6 bhiriyoni inowana
Pari Turkey zviri zvinodiwa kubva kunze kwenyika, 106 12 chitima rinovira, apo 5 kunozadziswa kuburikidza National Electric Train chirongwa. Nyaya dzasara 89 chitima anogadza pamwe omunharaunda uye omunyika zvivako kubereka vanenge mabhiriyoni 3,5 euros acharamba yakashumwa kuramba kuTurkey. Izvo zvinonzi mamiriro ezvinhu aya ane mhedzisiro inowedzera muindasitiri uye iyo yakataurwa ichasvika mabhiriyoni matanhatu emaEuro. Kuti uwane izvi kuwana kwehupfumi, kukosha kwekuisa mirairo kuTÜVASAŞ kunosimbiswa nhasi. Izvi zvinobvumira zvakasimba nguva dzose nechitima yakatarwa muTurkey vakasangana gobvu pasina kuva runotsamira kunze ari Logged uye hunogona kungoparara akasangana omunharaunda uye omunyika Zvivako zvinodiwa.
Inopa yakakwirira nyaradzo
Chitima chemagetsi chenyika, chinogadzirwa neTÜVASA whose uye chinomhanyisa kukurumidza kubva pamakiromita 160 paawa kusvika mazana maviri emakiromita paawa, chakagadzirwa nemuviri wealuminium uye inotarisira kuve chekutanga nehunhu uhwu. Iyo 200-mota yakaiswa neakakwira nyaradzo maficha anovandudzwa zvinoenderana nekufamba kwehukama. Yakagadzirwazve kuti iite zvese zvinodikanwa zvevatyairi vakaremara.
mabviro: Milliyet Newspaper
TUVASASA Kushambadzira kweNational Train Wagons
Uropi hwokufambisa muIstanbul ichave Yenikapı Transfer Center
Ubongo hweMetrobus hunoenda kuEdirnekapı
Mwoyo wemakambani emotokari uye vemabhizimisi enyika kuSakarya
Kuchagadzirwa kweNational Electric Sitima Kuenderera mberi kuTTVASAŞ?
Makambani Okudzivirira Helicopter Platforms
Mwoyo waAntalya uri kurova paTünektepe
Mwoyo Wekutamba Inotanga muTünektepe
kudzidzisa kurairika uye maitiro ekugadzirisa